Is Casilaada Kofi Annan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Is Casilaada Kofi Annan
La daabacay fredag 3 augusti 2012 kl 10.36
Kofi Annan oo xilkii wakiilnimada Suuriya iska casilay.Foto: Martial Trezzini/Scanpix.
Shalay waxaa xilkiisa in uu iska casilayo markay dhamaato bishaan augusti ku dhawaaqay wakiilka Qaramada Midoobay iyo ururka Jaamacada Carabta ee Suuriya Kofi Annan.Waxa uuna ku micneeyey is casilaadiisa in aysan suurtagal ahayn in laga dhadhiciyo dowladda Suuriya iyo mocaaradka in ay xabada joogiyaan oo hirgaliyaan hanaan siyaasadeed oo xal looga gaarayo mushkilada ka taagan dalkaas.
Waxuuna sidoo kale Kofi Annan dhaleeceyey kala qaybsanaanta ka jirta gulaha amniga Qaramada Midoobay oo uu ku tilmaameyn in ay caqabad ku noqotay fulinta howla loo xil-saaray
Wasiirka arimaha dibada Sweden Carl bildt oo ka hadlayey is casilaada Kofi Annan, ayaa sheegay qofkasta oo loo dhiibo xilka uu Kofi Annan baneeyey in uusan xal keenayninta inta golaha amniga uu kala qaysanyhay.
- Inta uu golaha amniga kala qaysanyahay waxba ma suurtagalayaan, Kofi Annan waxa uu isku deyey in uu mideeyo golaha amniga iyo dhamaan inta danaynaysa arimaha Suuriya, mar ayuu ku guulaystay balse markii danbe way buurtay. Hadii xal -la rabo in arimaha suuriya laga gaaro waa in la mideeyaa golaha amniga, ayuu yeri Carl bildt oo ah wasiirka arimaha dibada ee Sweden kana tirsan xisbiga Moderadka.